NNSW के हो?
नेपाल राष्ट्रिय एकल विन्डो (एनएनएसडब्ल्यू) एक स्टप शप हो जुन विदेशमा संलग्न सबै व्यापारीहरू र सरकारी एजेन्सीहरूलाई एकअर्कामा जडान गर्दछ र उनीहरूलाई एक प्लेटफर्ममा व्यापार प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ।
एक्जिम कोड भनेको के हो?
एक्जिम कोडले निर्यात आयात कोडलाई जनाउँछ। निर्यात आयात (ExIm) कोड नेपालबाट सामान आयात वा निर्यात गर्ने व्यक्तिको लागि दर्ता आवश्यक छ। ExIm कोड भन्सार विभाग, नेपाल सरकारको वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको छ। अर्को शब्दहरुमा, ExIm कोड ट्रेडरहरुलाई जारी गरिएको सरकारी पहिचान नम्बर हो। यसको अनुपस्थितिमा, सरकारले दर्ता नगरिकन आयातकर्ता / निर्यातकर्तालाई ट्र्याक गर्न सक्षम गर्न सक्दैन।
कसरी सेवाहरू पहुँच गर्ने?
त्यहाँ सेवाहरू उपलब्ध छन् NNSW पोर्टलमा जस्तै भन्सार शुल्क, क्याल्कुलेटर, भन्सार कर, कोडिफिकेसन, ट्यारिफ खोजकर्ता। अन्य सेवाहरू जस्तै LPCO कागजातहरू सबमिट गर्न प्रयोगकर्तालाई NNSW मा दर्ता गर्न आवश्यक छ।
NNSW का साथ दर्ता
व्यापारीहरूको लागि: तपाई प्रयोगकर्ता दर्तामा जान सक्नुहुन्छ र आवश्यक फारमहरू भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
NNSW मा दर्ता गर्न सक्षम हुन मलाई कुन कागजातहरू आवश्यक पर्दछ?
पछिल्लो कम्पनी दर्ता र प्यान आईडी को प्रतिलिपि
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें, म कसरी आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न सक्छु?
तपाइँको पासवर्ड रिसेट गर्न, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
LPCO के हो?
नेपालबाट / भित्र सामान आयात / निर्यात गर्नका लागि सरकारी एजेन्सीहरूले आवश्यक इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र र अन्य स्वीकृतिहरू।
कसरी LPCO अनुरोध गर्ने?
NNSW ट्रेड पोर्टलमा जानुहोस्> अनलाइन सबमिशन क्लिक गर्नुहोस्> लाइसेन्स, अनुमति, प्रमाणपत्र र अधिक क्लिक गर्नुहोस्। सबै आवश्यक फिल्डहरू भर्नुहोस् र सबमिट बटन क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कोटा के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
एक आयात / निर्यात कोटा व्यापार प्रतिबन्धको एक प्रकार हो जुन निश्चित अवधिमा आयात / निर्यात हुने वस्तुहरूको मात्रा वा मूल्यमा भौतिक सीमा सेट गर्दछ र निर्दिष्ट देश (मूल देश वा निर्यातको देश) बाट अनुमति दिईन्छ। प्रणालीले कोटा ब्यबश्थापन उपकरण प्रदान गर्दछ जसले व्यापारीहरूलाई आवश्यक मात्राका सामानहरूको लागि अनुरोध गर्न अनुमति दिनेछ र एजेन्सीहरूले यसलाई अनुमोदन गर्नेछन्। प्रणालीले एजेन्सीले अनुमोदित भन्दा बढि सामान आयात / निर्यात गर्न अनुमति दिँदैन।
कसरी संलग्न कागजात थप्ने सूचीमा छैन ?
संलग्न कागजातहरू थप्नको लागि तपाईले LPCO अनुप्रयोगको संलग्न कागजात ट्याबमा जानुपर्नेछ र "नयाँ संलग्नक थप्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। एट्याचमेन्ट कागजात प्रकार चयन गर्नुहोस्: 999 - - अन्य र फाइल संलग्न गर्नुहोस्।